Qoraalo iyo iskuxireyaal
Waxyaalo naga sabsan anaga
Ku soo-dhowoow dalka Iswiidan
Iswiidhan iyo Stockholm
Iswiidhan iyo luqadda/afka
Taariikhda dalka Iswiidan
Bulsho barwaaqasooran ku nool
Taariikhda magaalada Stockholm
Socdaalka gobolka Stockholm
Xuquuqda dadweynaha ee deegaanka
Hoyga iyo dhaqaalaha
Noocyada kala geddisan ee guryaha
Hoy gacan labaad ah ama qol kireysasho
Loogu talagalay dhallinyarada iyo ka wayn ba
Adiga oo ah qof itaaldarran
Habka guri lagu helo
Muhim haddii aad guurayso
Amaah, caymis iyo deeq
Degaanka iyo Qashinka dib loo isticmaalo
Daryeelka caafimaadka ee gobolka Stockholm
Sida daryeel loo raadsado
Maxay yihiin xuquuqdayda?
(Ny i Sverige)
Boggani wuxu ku saabsanyahay qofka ku cusub Iswiidhan. Marka aad ku cusub tahay Iswiidhan waxajira dhowr arrimood oo ay tahay in aad maskaxda ku hayso. Waxad u baahantahay in aad iska diiwaangeliso Skatteverket, waxa kale oo aad iska qoraysaa Forsäkringskassan si aad uga qaybqaadan karto nadaamka xasilloonida Iswiidhan.
Dhammaan dadka degen Iswiidhan waa la diiwaangeliyaa.
Dhammaan dadka degen Iswiidhan waa la diiwaangeliyaa. Meeshaas waxa la diwaangalin warbixin ku saabsan bulshada Iswiidhan ku nool iyo meesha ey ku noolyihiin.
Waxyaabo badan aad xaq u leedahay iyo waajib kugu ah waxey ku xirantahay
inaa diwaangalisan tahay
meesha aad ka diwaangalisan tahay.
Xaqa aad u lee dahay lacagta carruurta iyo lacagta kiro kabitaanka waxey ku xiranyihiin inaa diwangalisan tahay. Meesha canshuurta ku bixineysid, xaqa doorashada waxey ku xiranyihiin meesha aad ka diwaangalisan tahay.
La qabsi-siinta qaxootiga cusub
(Etablering av nyanlända flyktingar)
Waxa jira xuquuq gaar ahaaneed oo qusaysa adigaaga buuxiyey 20 jir (laakiin aan weli gaarin 65 jir) ee haysta sharciga degenaanshaha oo ah qaxootinimo, qaxooti la soo qaatay, magangelyodoon, ama kuwaas qof qaraabo la ah. Markaa waxa aad xaq u leedahay tusaale ahaan qorshe dejineed iyo lacagta dejinta. Haddii aad buuxisay 18 jir (laakiin aanad gaarin 20 jir), oo aanad waalid ku haysan Iswiidhan waxa kale oo aad xaq u leedahay caawimo. Qofka soo gelootiga cusub ahi waa qaxooti ama soo gelooti ku cusub Iswiidhan.
Waa qorshe saldhidig/degitaan ah oo aad wada dajinaysaan adiga iyo qofka kiiskaaga qaabilsan ee xafiiska shaqada. Qorshahan waxa ka mid ah koorsada barashada cilmiga bulshada oo sida ugu dhakhso badan laguugu diri doono. Barashada cilmiga bulshadu waa koorso/cashar 100 saacadood ah oo ku bixi doona afkaaga hooyo ama luqad kale oo aad si fiican u taqaan. Koorsada waxa aad ka baranaysaa xuquuqda iyo waajibaadka dimuqraadiyadda Iswiidhan iyo habka bulshadu u dhisantahay. Koorsadu waxay Iswiidhan kaa siinaysaa macluumaad muhiim ah oo ku siinaya bilow wanaagsan.
Ajaanibka waddanka ku cusub in ka badan intii hore ayaa xaq u leh barashada cilmiga bulshada
(Fler nyanlända invandrare har rätt att gå samhällsorientering)
Laga bilaabo 1 May 2013, ajaanibka waddanka ku cusub, in ka badan intii hore ayaa xaq u leh barashada cilmiga bulshada. Sharciga cusub ayaa sheegaya, in xafiisyada degmooyinka ay waajib ku tahay in ay siiyaan koorsada cilmiga bulshada dad badan oo hore oo aan u soo galeyn “sharciga ku saabsan aasaaska saldhigidda/degitaanka qayb ka mid ah ajaanibka dalka ku cusub”.
Dadka cusub ee sharcigan ka faa’iidaysanaya waxa ka mid ah:
(Den nya, utökade målgruppen är)
Dadka cusub ee ehel ahaan ku soo degay Iswiidhan ee buuxsaday 18 jir laakiin aan weli 65 jirka gaadhin, kuwaasoo ka diwaan gashan degmo. Waa in uu yahay muwaadin aan haysan dhalasho dalalka Midowga Yurubta ama Iswiserland.
Dadka laga reebay waa:
(De som inte omfattas är)
Kuwa dhigta dugsiga sare.
Dadka shaqo ahaan lagu keenay dalka.
Dadka ku yimid booqasho waxbarasho- ama cilmi-baadhe iyo qoysaskooda.
Diiwaangelinta ka dib waa in koorsada cilmiga bulshada la bilaabaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah. Waajibka xafiiska degmada ee ah in ay bixiyaan cilmiga bulshada waxa ay ku eg tahay saddex sano marka laga bilaabo maalinta qofka cusubi uu iska diiwaan geliyay degmo.
Sidee la isugu qoraa?
(Hur går anmälan till?)
Qofka ka mid ah dadkan cusub ee sharciga ka faaiidaysanaya waxa uu gobolka Stockholm toos ula xidhiidhayaa degmada uu deggan yahay. Xafiiska degmada ayaa qiimayn samaynaya oo go’aaminaya in qofku xaq u leeyahay cilmiga bulshada.
Wixii macluumaad ee dheeraad ah kala xidhiidh xarunta cilmiga bulshada ee gobolka Stockholm.
E-mayl infosam@edu.stockholm.se ama telefoon: 08-508 35443